Vaovao - Ahoana ny fomba hanamainana ny fampisehoana LED ivelany amin'ny fomba mahomby
Noho ny pixel matevina ny fampisehoana LED dia manana hafanana be izy. Raha ampiasaina any ivelany mandritra ny fotoana maharitra dia voatery hiakatra tsikelikely ny mari-pana anatiny. Indrindra, ny fanaparitahana ny hafanana amin'ny faritra midadasika [fampisehoana LED ivelany] dia nanjary olana iray izay tsy maintsy jerena tsara. Ny fanaparitahana hafanana an'ny fampisehoana LED dia misy fiantraikany ankolaka amin'ny ain'ny serivisy fisehoan'ny LED, ary misy fiantraikany mivantana amin'ny fampiasana mahazatra sy ny fiarovana ny seho LED aza. Ny fomba fanafanana ny efijery fampisehoana dia nanjary olana iray izay tsy maintsy dinihina.
Misy fomba telo famindrana hafanana: conduction, convection ary radiation.
Fampandehanana hafanana: ny fitarihana hafanana entona dia vokatry ny fifandonana eo amin'ny molekiola entona mihetsika tsy mandeha. Ny fitarihana hafanana ao anaty fitarihana vy dia tena amin'ny alàlan'ny fihetsiky ny elektrôna maimaim-poana. Ny fitarihana hafanana ao anaty matevina tsy mitarika dia azo tsapain-tanana amin'ny fangovitana ny firafitry ny lattice. Ny mekanisma fitarihana hafanana anaty rano dia miankina indrindra amin'ny hetsiky ny onja mahazendana.
Convection: enti-milaza ny fizotran'ny famindrana hafanana ateraky ny fifindra-monina eo anelanelan'ny ampahany amin'ilay tsiranoka. Ao amin'ny tsiranoka fotsiny no misy ny fifanarahana ary tsy azo ihodivirana miaraka amin'ny fitarihana hafanana. Ny fizotry ny fifanakalozana hafanana amin'ny tsiranoka mikoriana amin'ny alàlan'ny zavatra iray dia antsoina hoe famindrana hafanana mifangaro. Ny convection ateraky ny hakitroky ny faritra mafana sy mangatsiaka amin'ny tsiranoka dia antsoina hoe convection voajanahary. Raha vokatry ny hery avy any ivelany (fan sns ...) no ivoahan'ny tsiranoka dia antsoina hoe convection noterena.
Taratra: ny fizotran'ny zavatra iray mamindra ny fahaizany amin'ny endrika onja elektromagnetika dia antsoina hoe radiation radiation. Ny angovo mamirapiratra dia mamindra angovo ao anaty banga, ary misy ny fiovaovan'ny endrika angovo, izany hoe, ny angovo hafanana dia navadika ho angovo mamirapiratra ary ny angovo taratra dia navadika ho angovo hafanana.
Ireto misy antony manaraka ireto dia tokony hodinihina rehefa misafidy ny fomba famafana ny hafanana: ny fihenan'ny hafanana, ny hakitroky ny habetsahan'ny hery, ny fanjifana herinaratra tanteraka, ny velaran'ny faritra, ny habetsaky ny toetr'andro, ny toetr'andro iainana, ny hamandoana, ny tsindry amin'ny rivotra, ny vovoka sns.).
Araka ny mekanisma famindrana hafanana, misy ny fihenan'ny voajanahary, ny fanamafisana ny rivotra an-tery, ny fampangatsiahana rano mivantana, ny fampangatsiahana etona, ny fampangatsiahana thermoelectric, ny famindrana ny hafanana ary ny fomba fanaparitahana hafanana hafa.
Fomba famolavolana hafanana
Ny faritry ny fifanakalozana hafanana amin'ny fanamafisana ny faritra elektronika sy ny rivotra mangatsiaka, ary ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana eo amin'ny faritra elektronika sy ny rivotra mangatsiaka dia misy fiantraikany mivantana amin'ny vokatry ny fanaparitahana ny hafanana. Izany dia misy ny famolavolana ny habetsahan'ny rivotra sy ny fantson'ny rivotra ao anaty boaty fampisehoana LED. Amin'ny famolavolana ny fantson-drivotra, ny fantsona mahitsy dia tokony hampiasaina hampitana ny rivotra araka izay tratra, ary ny soroka sy ny famolahana maranitra dia tokony hialana. Ny fantson-drivotra dia tokony hisoroka ny fanitarana tampoka na ny fihenan-tsasatra. Ny zoro fanitarana dia tsy tokony hihoatra ny 20O, ary ny zoro fampihenana dia tsy tokony hihoatra ny 60o. Ny fantson-drivotra dia tokony hasiana tombo-kase araka izay azo atao, ary ny tadivavarana rehetra dia tokony manaraka ny làlan-kizorana.
Fiheverana ny famolavolana boaty
Ny lavaka hidiran'ny rivotra dia tokony hapetraka eo amin'ny ilany ambany amin'ny boaty, fa tsy ambany loatra, mba hisorohana ny loto sy ny rano tsy hiditra amin'ny boaty napetraka amin'ny tany.
Ny vent dia tokony hapetraka eo amin'ny lafiny ambony akaikin'ny boaty.
Ny rivotra dia tokony hivezivezy avy any ambany ka hatrany an-tampon'ny boaty, ary ny fidirana rivotra manokana na ny lavaka famohana no tokony hampiasaina.
Ny rivotra mangatsiaka dia tokony avela hikoriana amin'ny alàlan'ny faritra elektronika fanafanana, ary ny fisintahana fohy amin'ny fikorianan'ny rivotra dia tokony hosakanana miaraka amin'izay.
Ny fidiran'ny rivotra sy ny fivoahana dia tokony hasiana fàfana sivana mba hisorohana ny fahalotoana hiditra ao anaty boaty.
Ny famolavolana dia tokony hahatonga ny fivarotana voajanahary handray anjara amin'ny fivarotana an-tery
Ny endrika dia tokony hiantoka fa ny vavahady fidirana amin'ny rivotra sy ny seranan-tsambo dia mifanalavitra. Aza averina ampiasaina ny rivotra mangatsiaka.
Mba hahazoana antoka fa ny làlan'ny slot radiator dia mitovy amin'ny torolalan'ny rivotra, ny slot radiator dia tsy afaka manakana ny lalan'ny rivotra.
Rehefa napetraka ao anaty rafitra ny mpankafy dia matetika no sakanana ny fidiran'ny rivotra sy ny fivoahan'ny rivotra noho ny fetran'ny famolavolana, ary hiova ny fiakaran'ny asany. Araka ny traikefa azo ampiharina dia tokony 40mm miala ny sakana ny fidiran'ny rivotra sy ny fivoahan'ny mpankafy. Raha misy fetran'ny habakabaka dia tokony ho 20mm farafaharatsiny.